ရှောင်ကြဉ်ရန် CFD ထရေးဒင်းအမှား | CFD ထရေးဒင်းမဟာဗျူဟာ - စတော့အိတ်အွန်လိုင်း Investing
Difference များအတွက်စာချုပ်များ (CFDs) အွန်လိုင်းကုန်သွယ်လူကြိုက်အများဆုံးဘဏ္ဍာရေးတူရိယာတို့တွင်အဖြစ်ကြသည်။ ဒေါ်လာထရီလီယံနေ့ရက်တိုင်းကုန်သွယ်နေကြသည်။ သို့သော် CFD ကုန်သွယ်မြင့်မားသောအန္တရာယ်များကိုသယ်ဆောင်။ ဤအဘဏ္ဍာရေးတူရိယာဝယ်ရောင်းချခဲ့သူမဆိုကုန်သည်ပင်သေးငယ်တဲ့အမှားသင့်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏ကြီးမားသောအတုံးအထဲကသုတ်နိုင်သည်ကိုသဘောတူပါလိမ့်မယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, တစ်ဦးအနိုင်ရကုန်သွယ်ရေးသင်အမြတ်အစွန်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေပမာဏရဲ့မြှောက်လဒ်ဝင်ငွေနိုင်ပါတယ်။
ကြီးမားသောငွေရှာ၏သှေးဆောငျအပြင်ကုန်သည်များသူတို့ငွေသားထက်အာမခံသို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုန်ပစ္စည်းများအခြေချကြောင့် CFDs ကုန်သွယ်မှုရွေးချယ်။
သငျသညျကိုရှောင်ရှားသင့်ကြောင်းထိပ်တန်း5CFD ကုန်သွယ်အမှားတွေကို
1 ။ တစ်ခုတည်းကုန်သွယ်မှုအပေါ်လိုအပ်ပါကထက်ပိုမိုနေရာယူခြင်း
2 ။ မျက်စိကန်းအတွက် Going
3 ။ ကုန်သွယ်ရေးအတွက်အန္တရာယ်မသိ
4 ။ စီစဉ်သို့မဟုတ်သင့်အစီအစဉ်အပေါ်မှတစ်ဆင့်အောက်ပါမဟုတ်
5 ။ မှတ်တိုင်အမိန့်ကိုအသုံးချရန်ပျက်ကွက်
တစ်ဦးက CFD မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့တစ်ဦးဝယ်နဲ့ရောင်းသူတစ်ဦးအကြားစာချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစာချုပ်ရောင်းသူစာချုပ်အချိန် (ထိုစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံး) မှာဝယ်တစ်ခုနောက်ခံဘဏ္ဍာရေးတူရိယာနှင့်၎င်း၏တန်ဖိုးကိုလက်ရှိတန်ဖိုးကိုအကြားခြားနားချက်ပေးဆောင်လိမ့်မည်ဟုဖော်ပြထားသည်။ ခြားနားချက်အနုတ်လျှင်မည်သို့ပင်ဆို, ကခြားနားချက်ချေသူဝယ်ပါတယ်။
ဝယ်သောသူမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့နောက်ခံပိုင်ဆိုင်မှုများ၏တန်ဖိုးအားတက်သွားသို့မဟုတ်ချပါလိမ့်မယ်ဖြစ်စေကြောင်းခန့်မှန်းပြောဆိုချက်များသည်။ အဆိုပါခြားနားချက်အတွက်ငွေသားအခြေချနေထိုင်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဝယ်အမှန်တကယ်ကုန်သွယ်ခံရဘဏ္ဍာရေးတူရိယာပိုင်ဆိုင်ပေမယ့်စာချုပ်ကုန်ဆုံးသည်အထိ CFD မှအပေါ်ရရှိထားသူမထားဘူး။
CFDs မှတစ်ဆင့်ကုန်သွယ်ဘဏ္ဍာရေးတူရိယာ၏အချို့အဖိုးတန်သတ္တုများ, ရေနံစိမ်းနှင့်ရှယ်ယာအနကျအဓိပ်ပါယျပါဝင်သည်။
ကုန်သွယ် CFDs လုပ်ခံရဖို့ပိုက်ဆံရှိရဲ့သံသယရှိစရာမလိုပါပါပဲ။ ကံမကောင်းစွာပဲကုန်သည်တစ်ဦးကြီးမားသောရာခိုင်နှုန်းကိုမကြာခဏ (ခြားနားချက်အနုတ်) ကိုရှုံးနိမ့ဘက်မှာသူတို့ကိုယ်သူတို့ရှာပါ။ ဒါဟာပုံမှန်အားဖြင့်ကျနော်တို့ကိုအောက်တွင်ရှင်းပြငါးခုသောအရှောင်အမှားတွေကြောင့်ပါပဲ။
သင်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်တူရိယာပေါ်တွင်သင်၏အိမ်စာပြုသောအမှုများနှင့်စျေးနှုန်းဦးတည်ချက်အပေါ်ယုံကြည်စိတ်ချမှုများမှာပါတယ်။ သင့်ရဲ့အမြတ်အပေါ်တိုးမြှင့်ဖို့, သင်ကပေါ်သင့်အကောင့်ချိန်ခွင် 50% နေရာဆုံးဖြတ်။ သင့်ရဲ့ခန့်မှန်းသုံးသပ်သည်ဦးတည်ချက်အတွက်စျေးနှုန်းရွေ့လျား။ ထို့နောက်သူကရုတ်တရက်နောက်ကြောင်းပြန်။ ကံကောင်းတာက, သင်ကရပ်တန့်အရှုံးထားရှိင်ပေမယ့်သင့်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေပမာဏ၏ကြီးမားသောအတုံးယခုသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ CFDs စျေးကွက်အလွန်အမင်းမတည်ငြိမ်သောဖြစ်ပါတယ်။ စျေးလှုပ်ရှားမှုများကိုရုတ်တရက်နောက်ပြန်ဆုတ်အတော်လေးဘုံဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်တိကျတဲ့ကုန်သွယ်မှုအချို့စျေးနှုန်းမှာအဆုံးသတ်လိမ့်မည်ဟု 100% သေချာဖြစ်ဖို့လမ်းမရှိပါပဲ။
ဒီအမှားရှောင်ရှားရန်ရိုးရှင်းသောစည်းမျဉ်းလိုက်နာပါ။ တစ်ခုတည်းကုန်သွယ်မှုအပေါ်ရရှိနိုင်အကောင့်လက်ကျန်ငွေထက်ပို 2% နေရာဘယ်တော့မှမ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သြဇာကုန်သွယ်ရေးရဲ့အမြတ်အစွန်းအလားအလာတိုးမြှင့်ဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်သော်လည်း, သငျသညျစပါးအနည်းငယ်သာပြုလုပ်အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
ရိုးရှင်းစွာအဘယ်ကြောင့်တက်သွားလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဆင်းဆုံးရှုံးမှုများဖြစ်ပေါ်လာစေမည်ကိုနားလည်မရှိဘဲစျေးနှုန်းလမ်းညွန်ခန့်မှန်းပြောဆိုချက်များ။ CFD စျေးကွက်၏မတည်ငြိမ်သောသဘောသဘာနိုင်ငံရေးကနေရာသီဥတုအထိပေးသောအချက်များအခြေခံအားဖြင့်သြဇာလွှမ်းမိုးသည်။ အမြဲတမ်းပေါ်မှာသင့်ရဲ့ပိုက်ဆံရင်းနှီးမြှုပ်နှံရှေ့တော်၌ဘဏ္ဍာရေးတူရိယာ၏စျေးနှုန်းကိုထိခိုက်သောအချက်များနှင့် ပတ်သက်. အလုံအလောက်သတင်းအချက်အလက်ရှိသည်။
အတော်များများကပွဲစားများအမှန်တကယ်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များရရှိရန်မလွယ်ကူပါစေ။ သူတို့ကသင်ပိုမိုအသိပညာရဖို့ရန်ကိုသုံးနိုင်သည်ကြောင်းအလွယ်တကူဇယား, အညွှန်းကိန်းများနှင့်အခြားနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ tools တွေပေးလိမ့်မယ်။ သင်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်တူရိယာရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့လိုလျှင်အစဉ်အမြဲပြုလုပ်နာရီပေါင်းများစွာကြာမြင့်မည်ဆိုပါက၎င်း၏စျေးနှုန်းပင်အပြည့်အဝကိုပြောင်းလဲထိခိုက်စေပါလိမ့်မယ်သောအချက်များနားလည်ရန်အချိန်ယူပါ။ ဒါကအသိပညာသင်ပိုက်ဆံကယ်တင်မည်။
ဤသည်အသုံးအများဆုံးနဲ့အလွယ်တကူရှောင်နိုင်သည်အမှားတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကုန်သည်ကြီးများရိုးရှင်းစွာအမြတ်အစွန်းအလားအလာမြှုတ်နိုင်အရှုံးထက်နိမ့်သည်အဘယ်မှာရှိကုန်သွယ်ရေးထားပါ။ ဤကဲ့သို့သောအများအပြားအရောင်းအအလွယ်တကူသင့်ရဲ့တစျခုလုံးကိုအကောင့်ထဲကအသုတ်နိုင်ပါတယ်။
မည်သည့်ကုန်သွယ်မှုအားမရခြင်းမပြုမီ, သင်ခံရစေခြင်းငှါ, ဆုံးရှုံးမှုနှိုင်းယှဉ်ရခြင်းအလိုငှါအမြတ်အစွန်းပမာဏစဉ်းစားပါ။ ဆုံးရှုံးမှုပိုမိုမြင့်မားပါကတိုးမြှင့်သြဇာသို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေပမာဏကိုကျော်ကုန်သွယ်ရေးကိုစှနျ့လှတျဖို့က သာ. ကောင်းသည်။
ထို့အပြင်သင့်ရဲ့အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲကုန်သွယ်မှုမှအနည်းငယ်တူရိယာရှာဖွေတာပါဝငျသညျ။ အများစုကပွဲစားများကုန်သည်များအတွက်တူရိယာများစွာပူဇော်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီအသင်သည်ထိုသူတို့၏အသီးအသီး၌သင်တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနေရာရမည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ဒါဟာသင့်ရဲ့အစုစုကိုတည်ဆောက်ရန်နှစ်ခုမှငါးကွဲပြားခြားနားသောတူရိယာကိုသိရှိနိုင်ဖို့ကပိုသမ္မာသတိရှိသောပါပဲ။ ဒါဟာသင်တတ်နိုင်သမျှတန်ဆာအကြောင်းကိုအဖြစ်အများကြီးသင်ယူနောက်ဆုံးမှာဘယ်သူ၏ဖြစ်နိုင်ခြေသင့်ရဲ့မျက်နှာသာအတွက်ဖြစ်ကြောင်းအရောင်းအစေရန်အနေအထားအတွက်ဖြစ်ခွင့်ပြုပါတယ်။
တိုင်းအောင်မြင်သောကုန်သည်တစ်ဦးအစီအစဉ်နှင့်အတူကုန်သွယ်ဝင်သော။ : စီမံကိန်းကဲ့သို့သောအများအပြားမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုခြင်းကပါဝင်ပတ်သက်
- လက်ရှိအခြေအနေများပေါ် မူတည်. သင်, တာရှည်တိုတိုသွားပါသို့မဟုတ်တူရိယာအပေါ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရှောင်ရှားသလဲ?
- သင်သည်သင်၏အမြတ်အစွန်း reinvest သို့မဟုတ်သူတို့ကိုအပေါ်ကိုင်တော်မူမည်လော
သင့်ရဲ့အစီအစဉ်အပေါ်မှတစ်ဆင့်အောက်ပါမဟုတ်အခြားနီးကပ်စွာဆက်စပ်အမှားဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်ကပြန်ခုန်ထွက်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်အတွက်ကြာကြာတစ်ဦးဆုံးရှုံးကုန်သွယ်မှုကျင်းပရန်ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်။ ကရှုံးနိမ့အနေအထားအပေါ်ဆက်လက်ပါလျှင်, သင့်ရှုံးတက် piling ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့အစီအစဉ်အလုပ်မလုပ်သည်ဆိုပါကသင်ပထမဦးဆုံးကုန်သွယ်ရပ်တန့်နှင့်ပုံဆွဲဘုတ်အဖွဲ့ပြန်သွားကြောင်းအကောင်းဆုံးပါပဲ။ အတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်များထံမှသင်ယူခြင်းအမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်သောအစီအစဉ်များကိုဖော်ထုတ်ရန်ရန်နောက်ထပ်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်တိုင်များဆို CFD ကုန်သည်မှမရရှိနိုင်အရေးကြီးဆုံးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှု tools များထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျအမြတ်အစွန်းအတွက်သော့ခတ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ကုန်သွယ်ရေးအပေါ်ဆုံးရှုံးမှု minimize လုပ်ဖို့လိုတဲ့အခါသူတို့ကနေရာလေးကိုအတွက်လာ။ သငျသညျလုပ်တိုင်းကုန်သွယ်ရေးသည်ရပ်တန့်အော်ဒါများအသုံးပြုမှုကိုအောင်ဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်ပါပဲ။ ဒါဟာသင်အမြတ်အစွန်းအတွက်အရှုံးနှင့်သော့ခတ်သည်အဘယ်သူ၏စျေးနှုန်းကိုဦးတည်ချက်ရုတ်တရက်နောက်ကြောင်းပြန်တဲ့အနိုင်ရကုန်သွယ်ရေးအပေါ်ရရှိခဲ့သည် minimize လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
မှတ်တိုင်အမိန့်ကိုအသုံးပြုပြီးဘို့နောက်ထပ်မဟာဗျူဟာအာကာသသူတို့ကိုထွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ အတော်များများကကုန်သည်များမကြာခဏရပ်နားကစားသို့ကြွလာလျှင်သူတို့နောက်ဆုံးမှာမဆိုအမြတ်အစွန်းစေမည်မဟုတ်ကြောင်းစတင်စျေးနှုန်းနီးစပ်သူတို့၏မှတ်တိုင်အမိန့်ထားပါ။ ဤသည်, သို့သော်, ဝေးလွန်းဆိတ်ကွယ်ရာကိုသင်အာကာသသင့်ရဲ့မှတ်တိုင်များဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ သငျသညျကောင်းစွာစီစဉ်ထားပါတယ်လြှငျ, အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းစနစ်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်အဘယ်သူ၏ဖြစ်နိုင်ခြေအနိုင်ရတဲ့၏မြင့်မားသည်အနာဂတ်မရွေး, သင်စိတ်ချလက်ချလက်ျာရာအရပျမှာသင့်ရဲ့မှတ်တိုင်အမိန့်နေရာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
CFDs အရောင်းအဝယ်ဖြစ်တဲ့အန္တရာယ်များအကျိုးတူဖြစ်ပါတယ်။ အတော်များများကကုန်သည်များ၎င်းတို့၏အကောင့်ကိုကြည့်ပြီးနောက်ကြောင့်ရှောင်အမှားတွေမှရိုးရိုးကုန်ခမ်းရ CFDs ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖြတ်ခံရလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့တဲ့မဟုတ်ပါဘူးကြောင့်များစွာသောအခြားမတူညီတဲ့အမှားတွေရှိပါတယ်။ သငျသညျအကြှနျုပျတို့အထက်တွင်ဖော်ပြထားပါတယ်ငါးကိုရှောင်ရှားနိုင်နေလျှင်မူကား, သင် wile ဖြည်းဖြည်းသင့်ရဲ့ကုန်သွယ်အကောင့်ကြီးထွားလာကြီးမားသောဆုံးရှုံးမှုကိုရှောင်ရှားနိုင်ဖြစ်သင့်သည်။
သငျသညျကုန်သွယ် CFD ရဲ့အသစ်ဖြစ်ကြပါလျှင်ကျနော်တို့အလွန်အမင်း 24Option အကြံပြုပါသည်။ အဲဒီမှာပညာရေးစင်တာကြီးမြတ်သည်နှင့်တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာများထဲမှ!
အခုတော့ CFD ထရေးဒင်းအကောင့်ကိုဖွင့်
Tags: cfd ကုန်သွယ်အကောင့်အသစ်များ၏, cfd ကုန်သွယ်အရင်ကဆိုရင်, cfd ကုန်သွယ်အကျိုးကျေးဇူးများကို, cfd ကုန်သွယ်က legit ဖြစ်ပါသည်, cfd ကုန်သွယ် legit, cfd ကုန်သွယ်သြဇာ, cfd ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်း, cfd ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာများ, တစ်ဦး cfd ကုန်သွယ်ကားအဘယ်သို့, တစ်ဦး cfd ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းကဘာလဲ